के सत्ताधारी मात्तिदै छ ? - The Times of Nepal
के सत्ताधारी मात्तिदै छ ? के सत्ताधारी मात्तिदै छ ?
काठमाडौं । जसको स्थानीय तह, गाउँपालिका, नगर, उप र महानगरपालिकामा बहुमत छ र हालीमुहाली छ । आफूलाई समाजवादी भन्न रुचाउने घोषणा र प्रतिबद्धता पनि त्यही छ, उही पार्टीका सीमित व्यक्तिहरुको पार्टी र सत्तामा सहभागी रहेको छ । उही पहचँुवाला र जिम्मवोरीमा पुगेका व्यक्तिहरु भूईंफुट्टा भएका छन् ।
प्रत्येक बोली र क्रियाकलाप यसका ज्वलन्त उदाहरण हनु् । अर्थमन्त्रालय चलाउने पूर्व गभर्नर अर्थमन्त्री युवारज खतिवडाको एकलौटी भयो भनेर बजेट आ–आफ्नै मन्त्रालयले निर्णय गर्ने कुरा पनि हिजो केही मन्त्री र सांसदहरुले भनेका छन् । बजेटलाई अथर्मन्त्रालयमा केन्द्र्रित हँुदा अथर्मन्त्रीहरुको हालीमहुाली भएको उनीहरुको टिप्पणी छ ।
६ करोड रुपैयाँको विकास बजेट पाउँदा सांसदहरुको मुख बुझो लगाएको छ । तर आम सवर्साधारण र विकट क्षत्रेमा बसेका नागरिकहरुबारे सोच्न नसक्दा देश आत्मनिर्भर हुन नसक्ने तथ्य यथावत हुँदा बादल, गरिबी तथा भूिमसधुार मन्त्री पद्मा अयार्ल र सञ्चार तथा सरकारी पव्रक्ता गोकूल बास्कोटालगायतको अभिव्यक्ति चिन्ताजनक छ ।
जसको विरुद्धमा आम जनता र सरोकारवाला आन्दाेिलत हनुपुर्ने अवस्था छ । अहिले लाग्छ सरकारको पुरै ध्यान नेकपा विप्लवतिर केन्द्रित छ । पध्रानमन्त्री के पी.ओली, गहृमन्त्री थापा र उनका पव्रक्ता बास्कोटाको अभिव्यक्तिले पुिष्ट हन्ुछ । सरकारको टाउकोदुखाइ अहिले विप्लव भएको छ । पव्रक्ताबास्कोटाको विहीबारको भनाइले विप्लव समहू लटुाहा र संविधानविरोधी हो । उहीहरु भन्छन् विप्लवले धरेै क्षति व्यहोर्नुपर्छ । पर्यवेकहरु भन्छन् क्षतिको चिन्ता गर्नेले खोइत नियन्त्रण गर्नसकेको ।
सखंवुासभाका भिडन्त भयो भनियो पसु अगाडि अन्यत्र पनि भिडन्त भयो गोली हानाहान भनियो तर खोइत परिणामको खबर ? प्रश्न गर्दछन् बुद्धिजीविहरु ।
असार ५ गते प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइ हत्या गरिएको सलार्हीका नेकपा विप्लवका इञ्चार्ज कमुार पाडैलेका ेदाहासस्ंकार र मलामी जानहेरु स्थानीय ६÷७ सयजना रहेको हाम्रा प्िरतनिधि माधव खतिवडाले बताएका छन् । जसमा खोइत वर्तमान सरकारको बुझाइ जनताको आकर्षण विप्लवतिर रहेकोकुरा बुझ्न सहज भएको छ भने चिन्तक नवीन सिलवालको टिप्पणी छ । यसरी सत्ता र पार्टीमना हाली मुहाली रहेको व्यक्तिहरु मातिदै छन् ।
वर्ष २१ अङ्क ४६